Ngerabha Products Vulcanizing Tank - China Qingdao Machinery uqinise
Product Application ngerabha itanki iimveliso vulcanizing esisetyenziselwa ephilisa kwemveliso zerabha yokuhlanganisa. Iimveliso irabha inokuba rubber USB, izihlangu irabha, yerabha umbhobho, yerabha mqengqeleki, enamathelayo, ibhanti irabha, ngesiciko amanzi irabha, ibhola irabha, yerabha yethemba, isondo retread ubudala, yerabha kwakhona desulphurization kunye SBR nentlaka thermoplastic; anti-nokumelana, unyango ukumitha anti-deformation, ukutya kunye namayeza emveli Chinese ukuphelisa (wawubulala) iintsholongwane, noboya, isingci, SOC ...
iimveliso irabha itanki vulcanizing esisetyenziselwa ephilisa kwemveliso zerabha yokuhlanganisa. Iimveliso irabha inokuba rubber USB, izihlangu irabha, yerabha umbhobho, yerabha mqengqeleki, enamathelayo, ibhanti irabha, ngesiciko amanzi irabha, ibhola irabha, yerabha yethemba, isondo retread ubudala, yerabha kwakhona desulphurization kunye SBR nentlaka thermoplastic; anti-nokumelana, unyango ukumitha anti-deformation, ukutya kunye namayeza emveli Chinese ukuphelisa (wawubulala) iintsholongwane, noboya, isingci, iikawusi iingcinga ubushushu, engile umbingelelo kwaye bone ukuguqulwa ophezulu-koxinzelelo, bamafutha, haydrolisis iintsiba ezahlukeneyo, iimveliso aluminium igcwala. Kwakhona zisetyenziselwa izinto carbon, izixhobo asbestos ukukhuhlana, gypsum kunye neemveliso zayo, kunye nezinye izinto esisodwa, ukupheka, ediphini, omisa. Isigaba sesibini ingqiqo kuyilo rubber ityhubhu tank vulcanizing. 1, The irabha vulcanizer nemvelo! (Naphi na ubuchule, ebonisa uyilo ogxile abantu-) 2, ukhuseleko! (Ngokuhambelana: GB150-2011 "imigangatho yogcino loxinzelelo lemveliso", ISO9001: inkqubo esemgangathweni 2008 kwezatifikethi, uyilo iziqinisekiso HACCP ukhuseleko lokutya, ukuveliswa) 3, The vulcanizer irabha onokuthenjwa! (Ukukhethwa kwamalungu brand ehlabathini-edumileyo,) 4, Le vulcanizer irabha yi ugcino lwamandla! (Ilahleko lobushushu, umbane, umoya, ixesha ukuselwa ezine nengqiqo, kunye noun) 5, irabha Vulcanizer mhle ngembonakalo, inoveli, compact, ezilula! Isahlulo sesithathu rubber ityhubhu yoyilo itanki vulcanizing, isiseko lemveliso Products ngokuhambelana ngqongqo i "imimiselo umthamo" kunye GB150-98, GB151-98 ukwamkelwa lokuvelisa umgangatho, ulwazi iwaranti yesizwe kunye nobugcisa amaxwebhu ingqibelelo.
Technical iparameters of tank vulcanizing yerabha ityhubhu.
bepali itanki enganyangekiyo / ubude ityhubhu / umthamo epheleleyo 1500 mm / 3000mm / 5.3m3
xi Design 1.0Mpa
Uxinzelelo yokusebenza iphezulu yi 0.8Mpa
Iqondo lobushushu eliphezulu yokusebenza ka 180 ℃
Itotali efakiweyo amandla malunga 64KW
Power Ubonelelo ombane 380V
Pot umzimba Q345 eziphathekayo
Wall ububanzi yetanki yomzimba 12mm
Weight malunga 3 iitoni
Icandelo 6 itanki enganyangekiyo izibonelelo ezincedisayo (owned umsebenzisi-)
isiguquli ngumphunga: 0.6m3 / min
Icandelo 7: Impawu itanki yokuhlanganisa
◆ ulawulo zombane ngokuzenzekelayo ,
◆ elektroniki, mechanical kabini phezu-ombane ukhuselo.
◆ chain ukhuseleko ngoomatshini.
Ukulungiswa ◆ lobushushu ecaleni elektroniki.
◆ elektroniki phezu-lobushushu ukhuseleko oluzenzekelayo.
◆ lobushushu anomaly alarm.
◆ ulawulo xi zoqhagamshelwano zombane
◆ oluzenzekelayo ngehamile umphunga silencer.
◆ umahluko lobushushu phakathi amanqaku bembiza (distribution ubushushu) ± 0.5 ℃.
◆ ulawulo lobushushu Intelligent, ulawulo lobushushu accuracy ngaphakathi ± 0.5 ℃.
Iimveliso irabha, ezifana irabha, yokuhlanganisa, kwakhona irabha desulfurization, SBR zeplastiki thermoplastic; bamboo carbonization bamafutha, irabha, irabha, irabha, irabha, Wood umlilo, amanundu, anti-umhlwa, anti-deformation ukumitha, ukutya kunye Chinese amayeza obuphuma off (wawubulala) iintsholongwane.
Previous: Stainless Food Industrial embizeni yokupheka
Okulandelayo: Wood Timber Anticorrosive Treatment Tank
umatshini esisodwa irabha ephilisa egumbini
irabha esisodwa vulcanizer
irabha bapholisa esisodwa
irabha bapholisa kungaba
isitya umbhobho bapholisa yerabha
irabha yokuhlanganisa esisodwa
irabha vulcanizing kungaba
Imifuno zifakwa Desalting wokuhlamba iimpahla Machine
Iziqhamo nemifuno Ukuhlamba Processing Machin ...